रोजगार सम्झौताको लागि एक शुरुआत गाईड
तपाईको कम्पनीमा रिक्त पदहरू भर्न योग्य उम्मेदवार खोज्नु आफैमा एउटा काम हुन सक्छ। एकचोटि तपाईंले उत्तम उम्मेदवार फेला पार्नुभयो भने, प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि तपाईंले तिनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा राख्नु पर्छ।
रोजगार सम्झौताहरू नयाँ भाडाहरूको अपेक्षा र आवश्यकतालाई औपचारिक रूपमा परिभाषित गर्न एक उत्तम तरिका हो। यी कागजातहरूले रोजगारदाताहरू र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।
एक कडा रोजगार सम्झौता सफलताको लागि टोन सेट गर्दछ र यो नयाँ सम्बन्धको सबै महत्वपूर्ण पक्षहरूको लागि भ्रम हटाउँदछ।
के रोजगार अनुबन्ध?
रोजगार सम्झौता कानूनी रूपमा बाध्यकारी लिखित सम्झौता हो जसले संगठन र एक कर्मचारी बीचको रोजगार सम्बन्धको वर्णन गर्दछ।
रोजगार सम्झौताहरू रोजगार प्रक्रियाको लागि औपचारिक आवश्यकता हुँदैन। भर्ती, र यी सम्झौताहरू सबै बिभिन्न आकार र आकारहरूमा आउँनुहोस्। धेरै केसहरूमा प्रस्तावको औपचारिक चिठी र एक कर्मचारी पुस्तिकाहस्ताक्षर गरिएका सबै आधारहरूलाई कभर गर्न पर्याप्त हुन सक्छ।
यद्यपि रोजगार सम्झौताहरूले सम्बन्धमा अस्पष्टता हटाउन मद्दत गर्दछ र कर्मचारी र नियोक्ताबाट के अपेक्षा गरिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दछ। सामान्यतया औपचारिक सम्झौता बनाउन तपाईको सबै भन्दा राम्रो पक्षलाई यो हुन्छ।
रोजगार सम्झौताको आधारभूत
रोजगार सम्झौताको सर्तहरू प्रत्येक नयाँ भाडाका लागि अद्वितीय हुनेछ। यहाँ केहि सब भन्दा साधारण तत्वहरु लाई रोजगार सम्झौतामा समावेश गर्न अझ गहिराईमा हेरिन्छ:
कार्य विवरण, कर्तव्य र जिम्मेवारी
यो प्रत्येक रोजगार सम्झौताको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। कागजातले प्रश्नको स्थितिमा अपेक्षा र उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्नुपर्दछ।
स्थानको दैनिक कर्तव्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा सामान्य अपेक्षाहरू र जिम्मेवारीहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ केटरि server सर्भर भाँडामा लिदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले विवरणहरू थप गर्नु पर्दैन "ग्राहकको अर्डर लिदै "र" टेबलमा खाना ल्याउने "सम्झौताको यस खण्डमा। एक तर्फ, यी काम को स्पष्ट हिस्सा हो। अर्कोको लागि, धेरै विशिष्ट विवरण सहित कर्मचारीहरूले "यो मेरो काम होइन" भन्दै ढोका खोलिदिन्छ जब तपाईं उनीहरूलाई केहि गर्न भन्नुहुन्छ।
रोजगारीका सर्तहरू सामान्यतया खस्छन्। तीन मध्ये एक कोटीमा: पूर्ण-समय, अंश-समय वा अवधि।
धेरै रोजगारदाताहरूले 40० घण्टा पूर्ण-समय कामको रूपमा गणना गर्दछन्। तर पूर्ण-समय रोजगारीको कानूनी परिभाषा एक राज्यमा फरक फरक हुन्छ। उदाहरण को लागी, केहि राज्यहरु को लागी पूर्ण समय काम को हप्ता को लागी hours२ घण्टा को रूप मा परिभाषित गर्दछ। अंशकालिक रोजगार सामान्यतया प्रति हप्ता २० देखि 30० घण्टाको दायरामा हुन्छ, तर यो राज्यमा पूर्ण-समय मानिने भन्दा कम हुन सक्छ।
अंशकालिक रोजगार पूर्ण र आंशिक समयका सर्तहरूतिनीहरू कुनै पूर्व निर्धारित अन्त्य मिति बिना स्थायी आधारमा परिभाषित छन्।
निश्चित अवधिमा कामदारहरू निश्चित अवधिका लागि मात्र नियुक्त गरिन्छ। यस सम्बन्धको एउटा विशेष सुरु मिति र सम्झौताको अन्त्य मिति हुनेछ। स्वतन्त्र ठेकेदारहरूको विपरीत, एक निश्चित-अवधि कर्मचारीलाई सम्झौताको अवधिको लागि नियमित कर्मचारीको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।
केही रोजगार सम्झौताहरूमा दिन, घण्टा र तालिकाका अन्य तत्वहरू सामेल हुनेछन् जुन एक कर्मचारीले काम गर्नु पर्ने थियो। । यो विशेष गरी सत्य हो यदि कर्मचारीले रात र सप्ताहन्तहरू जस्ता अनियमित घण्टा काम गर्नुपर्‍यो।
एक समाप्ति धारा रोजगारीका सर्तहरूमा पनि सामेल हुन सक्छ। "इच्छा" रोजगार को लागी एक प्रावधान। यसको मतलब यो हो कि कि त कुनै पनि पार्टी कुनै पनि समयमा कुनै कारण बिना वा बिना नै सम्बन्ध समाप्त गर्न सक्दछ।
"अन्य रोजगार" लाई यहाँ परिभाषित गर्न सकिन्छ।। उदाहरण को लागी, धेरै संघीय कर्मचारीहरु लाई दोस्रो नौकरी प्राप्त गर्न को लागी अनुमति छैन कि आफ्नो आधिकारिक कर्तव्यहरु संग द्वंद्व हो।
स्पष्ट छ, भुक्तान सर्तहरू सबै रोजगार रोजगार को एक ठूलो हिस्सा हुनेछ।
यो खण्डले स्पष्ट रूपमा दुई पक्षहरू बीच सहमत भएका कर्मचारीको तलब, ज्याला वा आयोगको परिभाषा दिनुपर्दछ। साथै भुक्तान अवधि, सम्झौताको बोनस संरचना वा इक्विटी विकल्पहरूको बारेमा कुनै पनि जानकारी समावेश गर्नुहोस्। यसले 1०१ (के) मिलान, मेडिकेयर, दन्त, कम्युटर बेनिफिटहरू, परिवार र मेडिकल बिदा, स्वास्थ्य बचत खाताहरू, आदि समावेश गर्न सक्दछ। नयाँ भाडा रोजगार। यदि फाइदाहरूपरिवर्तन हुन सक्दछ, तिनीहरूलाई सम्झौताबाट बाहिरिनु उत्तम हुन्छ।
केही रोजगार सम्झौताहरूमा एक छुट्टै धारा समावेश छ। जब तपाईले अलग्गिने भुक्तानी प्रस्ताव गर्नुपर्दैन, यसले कामदारहरूलाई आराममा राख्दछ र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उनीहरूलाई बढी सहज बनाउँदछ।
पोस्ट-रोजगार सम्झौताहरूको रोजगार
करारमा कुनै पनि समावेश हुन अनिवार्य छ सम्झौताको म्याद समाप्त भएपछि कर्मचारी र नियोक्ताले पूरा गर्नुपर्दछ कि दायित्वहरू।
केही कर्मचारीहरूले गैर-खुलासा, गैर-अनुरोध वा गैर-प्रतिस्पर्धामा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुन सक्दछ। यसले उनीहरूलाई व्यापार रहस्य साझा गर्न वा ग्राहकहरूबाट चोरी गर्नबाट रोक्छ।
यी प्रकारका सम्झौताहरू व्यवसायको प्रकार र प्रश्नको स्थितिमा निर्भर हुन्छ।
उदाहरणका लागि, कानूनका लागि काम गर्ने वकिलहरू। फर्मलाई एक प्रतिस्पर्धा उपधारा अन्तर्गत भाडामा लिएको दुई बर्षको लागि kilome० किलोमिटर दायरा भित्र आफ्नै फर्म स्थापना गर्न प्रतिबन्धित हुन सक्छ।
जहिले पनि यी प्रकारका कागजातहरूको मस्यौदा बनाउँदा तिनीहरू अनुभवी अनुबन्धित वकिलसँग परामर्श लिनुहोस् कि उनीहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी छन् र तपाईंलाई आवश्यक सुरक्षा पाउनुहुन्छ। यी कागजातहरूमा कुनै त्रुटिहरू अदालतमा खडा हुन सक्दैन।
Emp रोजगार सम्झौताहरू सुधार गर्ने उपकरणहरू
रोजगार सम्झौताहरू सिर्जना गर्नु कठिन काम जस्तो देखिन सक्छ विशेष गरी शुरुआतका लागि। तर यी पाँच उपकरणहरूले तपाइँको जीवनको प्रक्रियामा सजिलो बनाउँदछ:
रकेट वकील अनलाइन कानूनी कागजात उद्योगमा एक नेता हो। तिनीहरू साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरूलाई कानूनी सेवाहरूको साथ समावेश गर्दछन् समावेश सेवाहरू देखि कागजात निर्माण सम्म। प्रतिमाह केवल $। .99 For को लागि, तपाईले चाहानु भए जति धेरै रोजगार सम्झौताहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।
वैकल्पिक रूपमा, कम भोल्युम प्रयोगकर्ताहरूले रकेट प्रयोग गर्न सक्दछन्।प्रति कागजात। 39.99 को लागि वकील। तर मासिक शुल्क राम्रो मूल्य हो, किनकि तपाईं केही वकिल सेवाहरूबाट पनि लाभ उठाउनुहुनेछ। तपाईं एनडीए, गैर-प्रतिस्पर्धा, गैर-आग्रह, आदि को लागि रकेट वकील प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सात दिनको परीक्षण संग नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्
#2- कानूनी ज़ूम
ले million० लाख ग्राहकहरु र २ लाख भन्दा बढी कम्पनीहरुलाई कानुनी सेवाहरु प्रदान गरेको छ, यसलाई एक बनाएर। सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन कानूनी समाधानहरू उपलब्ध छन्। प्लेटफर्म रोजगार सम्झौता टेम्पलेटको साथ आउँदछ जुन तपाईं मिनेटमा अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। केवल केही साधारण प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्, र कानूनी झूमले स्वचालित रूपमा तपाईको लागि रोजगार सम्झौता पूर्ण गर्दछ।
रोजगार अनुबन्धहरू बाहेक, कानूनी जुमसँग गैर-खुलासा, गैर-अनुरोध, गैर-प्रतिस्पर्धा करारहरू र कुनै अन्य कानुनी कागजात छ जुन तपाईंभाडामा लिने प्रक्रियाको बेला आवश्यक पर्न सक्छ। तपाईं आफ्ना कानुनी विज्ञहरूसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर लिनको लागि र सम्झौता कानुनी रूपमा सुदृढ छ भनेर निश्चित गर्न।
कानूनी जूम व्यवसाय योजनाहरू month 31.25 प्रति महिना
मा शुरू हुन्छ। #3-
एक सबै मा एक मानव संसाधन समाधान छ भर्ना उपकरणहरु, भर्ती र नयाँ कर्मचारीहरु को एकीकरण को लागी उपकरण संग। सफ्टवेयर एक अन-निर्मित इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर सुविधाको साथ आउँदछ तपाईंलाई अनबोर्डिing अनुभवलाई स्ट्रिमलाइन गर्न मद्दत गर्न। तपाईं रोजगार सम्झौताहरू वितरण गर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ भाडाहरूबाट हस्ताक्षरहरू अझ बढी प्रभावकारी रूपमा स .्कलन गर्न सक्नुहुनेछ।
सफ्टवेयर हामीसँग पनि डिजिटल हस्ताक्षर सूचनाहरू र व्यक्तिगत कार्यप्रवाहहरू छन् कि यो प्रक्रिया यथासम्भव सजिलैसँग चल्दछ। एक पटक एकीकृत भएपछि, सबै कर्मचारी सम्झौताहरू र अन्य संवेदनशील जानकारीती तपाईंको BambooHR कर्मचारी डाटाबेस मा भण्डारण गर्न सकिन्छ। BambooHR लाई एक उद्धरण र डेमो शुरू गर्न को लागी सम्पर्क गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं रोजगार सम्झौता सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ तर कहाँ सुरु गर्ने थाँहा हुनुहुन्न भने, पांडाडोक तपाईंले कभर गर्नुभयो। तपाईं यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ नि: शुल्क रोजगार सम्झौता टेम्पलेट प्राप्त गर्नका लागि। तपाईले अब गर्नुपर्ने सबै भनेको तपाईको कम्पनीको र तपाईको नयाँ भाडामा भर्नुपर्दछ, त्यसो भए तपाई जानु राम्रो हुन्छ। कार्यप्रवाह उपकरणहरू। सफ्टवेयर एक पूरा अनुबन्ध व्यवस्थापन समाधान हो, त्यसैले तपाईंको जीवन सजिलो बनाउन त्यहाँ धेरै सुविधाहरू छन्। योजनाहरू प्रति महिना $ १ at मा सुरू हुन्छ, र तपाईं यसलाई १ days दिनको लागि निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
# - - कागजात चिन्ह
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर स्पेसमा सबै भन्दा मान्यता प्राप्त नाम हो। 750०,००० भन्दा बढी ग्राहकहरूले विश्वभरका लाखौं हस्ताक्षरहरू सुविधाजनक बनाउन यस प्लेटफर्मको प्रयोग गरेका छन्। सफ्टवेयर इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर र करार लाइफसाइकल व्यवस्थापनका लागि उत्तम छ। चाहे तपाई केवल एकल कर्मचारीका लागि यो गर्नु पर्छ वा ठूलो मात्रामा भाँडामा लिनु पर्छ, कागजात साइन तपाईले कभर गर्नुभयो। योजनाहरू प्रति महिना $ १० बाट सुरु हुन्छ र तपाईं यसलाई -०-दिनको परीक्षणको साथ निःशुल्क प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। , यी द्रुत सुझावहरू र उत्तम अभ्यासहरू अनुसरण गर्नुहोस्। एक शुरुआतको रूपमा, यी साधारण सल्लाहहरूले तपाईंको जीवन सजिलो बनाउँदछ।
ट्रिक # 1: काम सम्झौता टेम्पलेट प्रयोग गर्नुहोस्यो
उत्तम रूपान्तरण गर्ने शफीफाइट पूरक स्टोर थिमहरू राजस्व बढाउन
2021-06-18 13:41:57 | वेबसाइट...
बेस्ट शिपिफाई कन्भर्जन सप्लीमेन्ट स्टोर स्टोर थिमहरू बढाउने राजस्व व्यवसायहरू कुनै पनि माइक्रो-आलालाई समर्पित गरिन्छ जब उनीहरू वेबमा उपस्थित हुन्छन् र अधिक पहिचान र प्रभावशाली हुन्छन्। गुगल खोजी पहिलो स्थान हो जहाँ एक आधुनिक ग्राहकले जनाउँछ जब उचित प्रकारको उत्पादन वा सेवाको आवश्यकता खोज्दै उनीहरूको...
तपाईको साइटलाई एक पेशेवर टच दिनको लागि उत्तम WordPress विषयवस्तुहरू
2021-06-18 13:37:09 | वेबसाइट...
तपाईंको IT व्यवसायमा ग्राहक विन्डो सिर्जना गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अर्को, तपाइँले तपाइँको वेबसाइटले तपाइँलाई सेवा दिइरहेको छ भनेर निश्चित गर्नु आवश्यक छ। केहि प्रेरणा चाहिन्छ? ध्यानपूर्वक तलको कम्प्युटर WordPress विषयवस्तुहरूको स through्ग्रहको माध्यमबाट स्क्रोल गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि त्यहाँ त...
१ best उत्तम मोबाइल तयार कलाकार वेबसाइट टेम्प्लेट २०२१
2021-06-18 13:30:52 | वेबसाइट...
तपाईं जस्तो सृजनात्मक व्यक्ति हुनाले, यो तपाईंको लागि एक तयार कलाकारहरूको वेबसाइट टेम्प्लेट प्रयोग गरेर जबडा-ड्रपिंग वेबसाइट सिर्जना गर्न मद्दतको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अझै तपाईंको अनलाइन उपस्थिति क्रमबद्ध गर्नुपर्दछ तपाईंलाई थाहा छैन कति हराइरहेको छ तपाईंको पागल प्रतिभा र उत्कृष्ट काम देखाउनुहोस् र स...
Ace 2021 वेब उपस्थितिको लागि २ 26 व्यावसायिक वेबसाइट टेम्प्लेटहरू
2021-06-18 13:18:03 | वेबसाइट...
रचनात्मक व्यक्ति, एजेन्सीहरू, व्यवसाय र कर्पोरेसनहरू, पेशेवर वेबसाइट टेम्प्लेटहरू तिनीहरूलाई कार्यात्मक वेबसाइटहरूमा परिवर्तन गर्न तयार छन्। तपाईंको पहुँच विस्तार गर्नुहोस् र तपाईंको क्षमता उच्चतममा बढाउनुहोस्। सयौंका साथ, हजारौं उत्पादनहरू उपलब्ध नभएको खण्डमा हामीले सबै भन्दा राम्रो र बढ्ता आशा गर्...
मानव संसाधन कार्यहरूका लागि शुरुवातकर्ता गाईड
2021-06-17 05:34:53 | वेबसाइट...
एक व्यवसाय मा मानव संसाधन को महत्व को अक्सर कम मूल्यांकन गरिन्छ। यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण विभागहरू मध्ये एक हो किनकि एचआर कोटि अन्तर्गत पर्ने कार्यहरू प्रत्येक व्यवसायको अभिन्न हिस्सा हुन्। एचआर व्यवसायको लागि नयाँ भाँडाको सम्पर्कको पहिलो बिन्दु हो, र हरेक चरण जुन मार्गमा हुन्छ, पदोन्नतीहरू, तलब परिव...
कसरी एक पेरोल बजेट सिर्जना गर्ने
2021-06-17 04:49:45 | वेबसाइट...
पेरोल यस्तै तर्कसंगत सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय खर्च हो, सामान्यतया एक संस्थाको खर्चको लगभग २०% को लागी। यस महत्वपूर्ण लाइन वस्तुलाई बेवास्ता गर्दा छिटो ब्यापारको लागतमा एक अनियन्त्रित घुमाउरो लाग्न सक्छ। एक अस्थिर कार्यबल संग, तपाईं एक क्रिस्टल बल को लागी सालको लागि आफ्नो तलब खर्चको पूर्वानुमान गर्न छैन...
2021-06-17 04:04:34 | वेबसाइट...
MyCompanyWorks लगभग दुई दशकहरु को लागी भएको छ। धेरै बर्षमा, तिनीहरूले 50० राज्यहरूमा उद्योगको विस्तृत श्रृंखलामा ,000०, ००० भन्दा बढी व्यवसायहरू निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्। उनीहरूले एलएलसीहरू, सी कर्पोरेसनहरू, र एस कर्पोरेसनहरूको लागि व्यवसाय सुरु सेवाहरू प्रदान गर्दछ। सरलता, कम लागत र प्रयोग...
वेबसाइट योजनाको लागि पूर्ण गाईड
2021-06-16 06:34:49 | वेबसाइट...
प्रकटीकरण: यो सामग्री पाठकहरूले समर्थन गर्दछ यसको मतलब यदि तपाईंले हाम्रा केही लिंकहरूमा क्लिक गर्नुभयो भने हामी एक कमिशन कमाउन सक्दछौं। सबै सफल वेबसाइट सुरूवातहरू ठोस योजनाको साथ सुरू हुन्छन्। चाहे तपाइँ ब्लग, एक व्यक्तिगत साइट, वा एक व्यापार वेबसाइट शुरू गर्दै छन्, यो गाइड तपाइँ तपाइँको वेबसाइट यो...
१० मिनेट भन्दा कममा कसरी अनलाइन फाराम सिर्जना गर्ने
2021-06-16 03:39:14 | वेबसाइट...
के तपाईं आफ्नो साइटमा अनलाइन फारमहरू प्रयोग गरेर ग्राहकहरूमा बढी आगन्तुकहरू रूपान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ? अनलाइन फारमहरूले तपाईंको पाठकहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछ र ईमेल न्यूजलेटरहरू वा अन्य अभियानहरूको लागि साइन अप गर्न यो ट्यूटोरियलले तपाईंलाई कसरी पृष्ठहरूमा निर्बाध इनलाइन फारामहरू थप गर्ने देखाउनेछ। ...
HTML मा span के हो?
2021-06-13 22:08:48 | वेबसाइट...
फ्रन्ट-एन्ड मास्टरिंगको लागि आफ्नो यात्रामा भेट्ने थुप्रै HTML तत्त्वहरू मध्ये, स्प्यान एक हो जुन तपाइँ प्राय: धेरै चोटि देख्नुहुनेछ। तर, अन्य तत्वहरूको विपरीत, एक्लै ट्यागले पृष्ठ प्रकारको विशेष प्रकारको सिर्जना गर्दैन। सुरुमा, यो भ्रमपूर्ण हुन सक्छ: के को लागी एक राम्रो चीज जस्तै राम्रो छ? यो धेरै...
१ Music संगीतकार वेबसाइट टेम्पलेट्स गायक र ब्यान्ड २०२१ का लागि
2021-06-13 13:57:47 | वेबसाइट...
यदि तपाईं एक कलाकार हुनुहुन्छ जसले मनमोहक ट्युनहरू मार्फत आफैलाई अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, यी संगीतकारहरूको वेबसाइट टेम्प्लेटहरू तपाईंको लागि उत्कृष्ट हुनेछन्। तपाईंको संगीतलाई संसारमा बढावा दिन ठूला वेबसाइटहरू निर्माण गर्नका लागि छिटो र प्रभावशाली उपकरणहरू जो कोहीले जो यसलाई स्थानीय रूपमा गरिरहेका छन् ...
१ best उत्तम वर्डप्रेस सदस्यता प्लगइन २०२१
2021-06-12 20:14:43 | वेबसाइट...
चाहे तपाइँ भर्खर सुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा पहिले नै कर्षण प्राप्त गर्दैछ, WordPress सदस्यता प्लगइनहरूको साथ तपाइँ तपाइँ तपाइँको पृष्ठ मुद्रीकरण गर्न र यसलाई आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो विशेष सामग्री, एक पाठ्यक्रम उन्मुख प्लेटफर्म, वा सदस्यता आधारित व्यापार को साथ एक ब्लग हो, जुनसुकै तपाईंको परियोजना, ...
शीर्ष free० नि: शुल्क रेस्टुरेन्ट मेनू psd टेम्पलेट्स र मकअपहरू २०२१
2021-06-12 20:07:27 | वेबसाइट...
तपाईंको रेस्टुरा मेनु सधैं पहिलो चीज हुनेछ ग्राहकहरू आफैंले हेर्नु अघि उनीहरू आफैंले टेबुल पनि भेट्टाउनेछन्। त्यसकारण मेनू हुनु महत्वपूर्ण छ जसले तपाईंको उपलब्ध वस्तुहरू र तपाईंको रेस्टुरेन्ट शैली प्रदर्शन गर्दछ। अमेरिकामा मात्र 700००, ००० भन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरू छन्। यद्यपि धेरै 'चेन रेष्टुरेन्ट' ...
१ best उत्तम अन्तर्क्रियात्मक वेबसाइटहरू [+ कसरी आफ्नै बनाउने]
2021-06-11 19:41:39 | वेबसाइट...
उत्तम वेबसाइटहरू दिमागमा प्रयोगकर्ताहरू साथ डिजाइन गरिएको हो। अन्तर्क्रियात्मक वेबसाइटहरू विशेष गरी प्रयोगकर्ता केन्द्रित डिजाइनमा राम्रो गर्दछन्। तिनीहरू केवल निजीकृत र रमाईलो छैनन्, उनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुभवमा नियन्त्रण दिन्छन् र उनीहरूलाई चाहेको जानकारीमा मार्गदर्शन गर्दछन्। अन्तर...
एचटीएमएलमा 'स्प्यान' के हो?
2021-06-11 19:39:25 | वेबसाइट...
धेरै HTML तत्त्वहरू जुन तपाईं अगाडि अन्ती मास्टरिंगको लागि तपाईंको यात्रामा आउँनुहुनेछ, स्प्यान एक हो जुन तपाईं प्राय: धेरै चोटि देख्नुहुनेछ। तर, अन्य तत्वहरूको विपरीत, एक्लै ट्यागले पृष्ठ प्रकारको विशेष प्रकारको सिर्जना गर्दैन। सुरुमा यो भ्रमपूर्ण हुन सक्छ: वास्तवमा को लागी एक वस्तु के हो? यो धेरै ...